Yini okusha at Six Flags for 2016 - Wild Coasters and More
Ukuhamba Komndeni Ama-Park Park
I-Flags ayisithupha ye-2016 Ride Guide
Ama-VR Coasters amasha nokuningi okuza ePhakethe
Futhi, wonke amapaki kulayini we- Six Flags ayobe ethola okuthile okusha ngesikhathi sika-2016. Ngenkathi kuzoba nenqwaba yezinto ezijabulisayo endleleni (lena yiMilayezo eyisithupha emva kwakho konke), lokho akusho ukuthi yonke indawo izobe iphuma nge-coaster, emisha, ehlekisayo-nakuba iqiniseke ukuthi amanye ama-coasters ayaza .
Ezintabeni ezinkulu, uchungechunge lwepaki lwamemezela ekuqaleni kukaMashi 2016 ukuthi luzokhipha ama-coasters wangempela ezindaweni ezingu-9. Bayothatha ama-roller coasters asekhona bese befaka ulwazi lwe-VR. Abagibeli bazogqoka ama-headsets e-VR ngenkathi begibele bese bebhapathizwa ku-Superman noma ku-"New Revolution" indaba ye-sci-fi. Funda mayelana nentuthuko ejabulisayo ekubukekeni kwami kwamaqoqo ama-VR ayisithupha .
Njengoba kuye kwaba njalo eminyakeni embalwa eyedlule, akuwona wonke ama-coasters amasha azoba ngu-100% omusha. Lokhu akusho ukuthi kufanele ube mnandi kakhulu, noma kunjalo. Eqinisweni, ukugibela okungcono kakhulu kwe-Flags 'ayisithupha' kuye kwaba yindlela eyenziwe yamuva yama coasters afana ne- Twisted Colossus eMountain Mountain ne- Wicked Cyclone ku-Six Flags New England. Ngo-2016, inkampani efanayo ephethe lawo magugu izobe ivuselela kabusha i-coaster yasekudala e-Discovery Kingdom eCalifornia. Abantu abasezindaweni ezisenyakatho kahulumeni kufanele babe nokuphathwa.
Leli chungechunge laya endaweni ebumnyama futhi lavula ukugibela okumnyama okunamandla ngo-2015. Funda isibuyekezo sami . Ngakho-ke, kuyasikhuthaza ukubona ukuthi ukugibela kuka-E-Ticket okusekelwe emlandweni womabili kuzoqala ngo-2016.
Kuzophinde kube khona ukugibela kanye namazwe abhekene nezivakashi ezincane, ezinye izindawo ezikhangayo zokupaka kwamanzi, ezinye ukugibela ezihambayo (owaziwa ngokuthi "u-whirl-'n-hurl" ugibela embonini), nezinye izinto ezihambelanayo. Ake siqhubekele phansi sonke isigaba se-Six Flags sika-2016. Amapaki ahlelwe ngama-alfabhethi ngombuso wase-US ngezindawo zaseCanada naseMexico ezibalwe ekugcineni.
California: Six Mountain Magic Magic
Okusha ngo-2016: I-New Revolution nge-VR
Eminyakeni engu-40 eyedlule, iMountain Magic yavula i-coaster yokuqala yokuqala. Ukuhamba komlando kwakwaziwa ukushaya abagibeli kancane. Izitimela ezintsha ze-coaster zizohweba izigwegwe ezingaphezu kwe-shoulder (okuyinto eyimbangela yesigwebo esiningi) ngamapayipi kanye namathole wezinyane. Umphumela kufanele ube uhambo olungenabuhlungu, olusheshayo. Amafulegi ayisithupha athembisa isikhathi esengeziwe se- airtime . Ngokuphonsa umsebenzi omusha wepende phezulu kwezinye ukuguqulwa, ipaki kufanele ibuyiselwe i-Revolution kuyo yonke inkazimulo yayo.
Futhi, i-New Revolution izoba yinye yezinkampani zezinketho ukuze zinikeze isipiliyoni sangempela seqiniso kule nkathi.
I-California: Umbuso Wokutholwa Kwama-Six Flags
Okusha ngo-2016: I-Joker
Umkhiqizi ohamba phambili, i-Rocky Mountain Construction, wakha isigaba esisha somshini wokuthakazelisa: i -hybrid wooden-steel coaster . Le nkampani igqamisa ithrekhi yayo yensimbi enegunya lobunikazi kuma-coasters asemaphandleni ekhona, futhi adala ukugibela okumangalisayo, okungahle kube ngukukhanya kweglasi ngesikhathi esisodwa. Konke kuye kwaba okumangalisayo. Ngibikezela ukuthi i-The Joker izoba enye eyinqobe. I-RMC izokwenza i-makeover voodoo yayo ku-coaster yangaphambili yezinkuni zokhuni futhi idale ukuhamba kwe-Batman-themed ngenkathi ezayo.
Georgia: Amapheshana ayisithupha phezu kweGeorgia
Okusha ngo-2016: I-DC Super Friends ne-Bugs Bunny Boomtown. Dare uDeveli Dive ukwengeza isipiliyoni se-VR.
I-Georgia Park izokwenza futhi ikhulise izindawo zayo zezingane nge-batch of new rides themed kubo bonke abalingiswa Looney Tunes kanye superheroes Justice League. Esikhundleni sokugibela kwezingane kuphela, lezi zikhangiso ezintsha zizoklanyelwe abazali nabazali ukuba bajabulele ndawonye. Kuyoba khona ukugibela okujikelezayo, umbhoshongo wokudonsa, inkinobho yesibuko, nokuningi.
Futhi, i-Dare Devil Dive coaster yePare yokupaka izofaka into engokoqobo yangempela kule nkathi.
Illinois: Amabhulogi ayisithupha I-America yaseMelika
Okusha ngo-2016: I-Justice League: I-Battle for Metropolis
Amafulegi ayisithupha ayaziwa nge-Disney- naku-Universal-level media based, ezikhangayo zokuxhumana. Kodwa uhambo lwe-DC Comics, olwethulwa emachwebeni alo aseSt. Louis naseDallas ngonyaka odlule, lushintsha umbono. Okukhangayo okuyisimanga futhi okufisa ukuzijabulisa kuyishintsho semidlalo yohlu lwepaki. Njengoba ukubuyekezwa kwami kwe-Justice League: Battle for Metropolis kubonisa, izivakashi eziya e-Great America ngo-2016 zizobe zelashwa.
Okusha ngo-2016: I-Splashwater Falls. I-Superman Ride Steel ukwengeza isipiliyoni se-VR.
Isakhiwo esikhulu sokudlala samanzi, esiphelele ibhakede lokulahla, abaprayisi, amaslayidi amancane amancane, amakhanda ezintambo, nokuningi kuzogcina izingane zonyaka wonke zixakekile (futhi zimanzi) ngenkathi ezayo eSikhwameni samanzi samanzi aseMelika, i-Hurricane Harbour.
Futhi, ama-Six Flags America's Superman coaster azofaka ulwazi lwangempela lolo nyaka.
EMassachusetts: Amabhulogi ayisithupha New England
Okusha ngo-2016: I-Fireball kanye ne-Superman coaster xaxa ukufaka ulwazi lwe-VR.
I-Bizarro steel hypercoaster emangalisayo yepaki izobuyela esihlokweni sayo sokuqala futhi ibizwe ngokuthi i-Superman i-Ride. Izobuyiselwa emibala ye-Supe eluhlaza okwesibhakabhaka nokubomvu. Noma yikuphi amaFlegi ayisithupha okukhetha ukukubiza, yi-IMHO, i -coaster enhle kakhulu yezwe ezweni. Futhi thola lokhu: Kuzophinde kwengeze isipiliyoni esiphezulu se- Superman-themed lesi sizini.
Futhi, izindawo eziningi zokupaka amaPlagi ayisithupha ziye zithola ukuhamba kwe-Fireball okufana nomdlalo wokuthakazelisa. Manje yisikhathi sokuletha eMassachusetts. Isitimela esendaweni efana ne-coaster iyokwenza izingodo eziqhubekayo, kokubili phambili nangemuva. Ukuchithwa kwe-70-foot-long kuzofaka izikhathi eziningi ezisezingeni eliphezulu.
Missouri: Six Flags St. Louis
Okusha ngo-2016: I-Fireball ne-Ninja ukwengeza isipiliyoni se-VR
I-Ninja coaster yepaki izofaka isipiliyoni sangempela sangempela kule nkathi.
Ngikutshele ukuthi amapaki amaningi ayisithupha ama-Flags aye athola ama-clones we-mega-looping carnival-like thrill ride (bheka ngenhla). Nakhu okunye.
I-New Jersey: Amabhulogi ayisithupha Okuzijabulisa Okukhulu
Okusha ngo-2016: I-Total Mayhem 4D
Ngonyaka odlule, amaFlegi ayisithupha aletha umdwebo we-"Free Spin" wephiko kwelinye lamapaki aseTexas. I-"DD "ye-4D, i-compact ride eyathatha ugqozi kusukela ku-X2 e-groundbreaking eMountain Mountain, yayiyi-hit enkulu. Inguqulo yesibili yayo iza eNew Jersey. Ukuze uthole umqondo walokho okukuyo, funda ukubuka kuqala okuningiliziwe kwe-Batman: I-Ride e-Fiesta Texas, i-coaster evuliwe ngo-2015.
I-New York: I-Great Escape
Okusha ngo-2016: Steamin 'Demon ukwengeza i-VR nohambo olusha lweGreek Lightnin'.
I-steamin 'Demon steel coaster yepaki izofaka ulwazi lwangempela lolo nyaka.
I-Yup, i-Greezed Lightnin 'yinye ukuhamba kwe-mega-looping. (Bheka Amafulegi ayisithupha eNew England ngaphezulu.)
Texas: Six Flags Fiesta Texas
Okusha ngo-2016: I-Fireball, i-Hurricane Force 5, ne-Spinsanity
I-Fireball izofana nokugibela ukuhamba okufika kwamanye amapaki afana ne-Six Flags New England. Isiphepho Samandla 5 sizothumela abagibeli epulatifomu ejikelezayo emuva nangaphezulu nge-U-coaster track. Futhi i-Spinsanity izoba inguqulo yekhulu lama-21 ye-Tilt-A-Whirl yakudala.
Texas: Amabhulogi ayisithupha Phezulu eTexas
Okusha ngo-2016: I-Shockwave ukufaka i-VR. Impindiselo ye-Riddler, i-Catwoman Whip, ne-Harley Quinn Spinsanity
I-classic Shockwave cooping coaster yepaki izofaka ulwazi lwangempela lolo nyaka.
I-original Flags Ipaki yePitrus izophinde ithole ukugibela emisha emithathu, yonke into ehlelwe kubahlali abaye bahlasela iThabham City futhi banikezwa iBatman inqwaba ye-agita. I-Riddler Revenge izoba yi-pendulum ride. Ku-Catwoman Whip, abagibeli bazobe bezungeza (kodwa ngokubonga hhayi, njengoba igama libonisa, bahlwithwe), futhi i-Harley Quinn Spinsanity izoba ukuhamba okuhamba phambili kwe-Tilt-A-Whirl.
I-Canada: La Ronde
Okusha ngo-2016: Le Vampire Emuva kanye ne-Phoenix ne-Graviton. UGoliath ukuthola i-VR.
I-Goliath hypercoaster enhle kaLa Ronde izokwengeza okwenzekayo kulo nyaka.
Ipaki izoguqula ukuqondisa kwesitimela ngokuhamba kwayo, iLe Vampire, ukuze abagibeli bayobe bebhekene naso emuva. Abagibeli bazokwazi ukushayela izimoto zabo ku-Phoenix ejikelezayo, kuyilapho zizothunyelwa ku-360 degree degree kwi-Gravitor.
IMexico: Amapheshana ayisithupha eMexico
Lokhu kuyoba ipaki yesibili kulolu chungechunge ukuthola ukuhamba okumnyama okuhlangene ngo-2016. Bheka Amapheshana ayisithupha eMelika Melika ngenhla.
Thola i-Discount ku-Six Flags Tickets
Amapaki Ezinhloko Zemindeni Ngezingane Ezincane
Vumela Izikhumbuzo Ziqale eDisney World naseDisneyland
I-Crosswinds Indoor Water Park Resort
Ama-Roller Coaster e-10 aphezulu kunazo zonke eMelika
Uhlobo Luni Lwethikithi Engingayidinga Ukuhamba I-Hogwarts Express?
Izinhlelo zokusebenza zokuhamba ezihamba phambili ze-Great American Road Trip
I-Thanksgiving Day Week Weekend e-Reno
Amagama abalulekile aseJalimane
Imithetho Nemithetho Yokuphepha Emlilweni Esemthethweni yaseMichigan
Ama-ReelAmakhono: I-NY Yokukhubazeka Ifilimu Yomkhosi ifika ku-Queens
Ichibi Kariba, Afrika, Isiqondiso
I-Georgian Architecture e-Ireland
Umlando we-Grand Central Station ka-NYC
Ubani Ohlala Emaphandleni aseMalala?
I-Spellbinding Sausalito: I-San Francisco Day Day elula
Ama-Gay Days Las Vegas 2016
Imithetho yababhemayo ababhema eDisneyland
Amaphuzu Okubaluleke Kakhulu Amaphuzu Ongayibhala
Amakethe Amapulazi ase-Washington, DC